I-Link Acquisition Playbook | Martech Zone
I-Link Acquisition Playbook
NgeSonto, Novemba 4, 2012 NgoMgqibelo, Novemba 3, 2012 Douglas Karr
Lapho nje abanye abantu bebona ukuthi izixhumanisi kumasayithi angaphandle zingakhuphula izinga lakho le-Google, imboni ye-SEO yaqhuma ngokukhula. Kwakuyimakethe eyizigidigidi zamarandi futhi iGoogle yasheshe yahluleka ukulawula ukuhlinzeka abasebenzisi ngemiphumela emihle. Kuphenduke umncintiswano wokuthi ngubani okhokhele ama-backlinks amaningi. Ngokujabulisayo, ngabathengisi abafanelekile, laba Abakhohlisi be-SEO bamisiwe kakhulu. Izinguquko ze-Google algorithm ziveze izixhumanisi ezingabekwanga kahle futhi seziqale nokuhlawulisa izinkampani lapho zithola khona izixhumanisi ezingezona ezemvelo.
Izixhumanisi ezithengwe ngenhloso yokushintsha noma ukukhohlisa imiphumela yosesho yephula izinkombandlela ze-Google Webmaster Guidelines.
Futhi ungakholelwa kunoma ngubani othi ungathenga okuqukethwe ngezixhumanisi nokuthi ngandlela thile akuphuli imigomo. Uma inhloso yokuqukethwe okuthengiwe bekungukubeka leso sixhumanisi, usaphula imigomo yesevisi ye-Google!
Lokhu infographic, Ama-Touchdowns Wobuciko - I-Link Acquisition Playbook, I-infographic enhle echaza izinselelo, imihlahlandlela, namathuba wokwakha izixhumanisi ngokwemvelo. Impendulo, kunjalo, ukukhohlwa izixhumanisi nhlobo bese umane ugxile kwimizamo yakho yokuthuthukisa okuqukethwe okungakholeki.
Okuqukethwe okuhle kwabiwe. Ukwabelana kwenziwa kumanethiwekhi afanele. Ukwabelana okuhambisanayo kushayela izixhumanisi ezihambisanayo. Izixhumanisi ezifanele zishayela izinga.
Tags: izixhumanisi zokwakhaukutholwa kokuxhumanisaukwakha isixhumanisisimo organicukusesha okuphilayoSesha Marketingseo
Nov 8, 2012 ngo-10: 57 AM
Ukusetshenziswa okuhle kwamagama ebhola lezinyawo ukuze udlulisele iphuzu lakho mayelana nemikhuba emihle nemibi yokwakha izixhumanisi ngendlela eyingqayizivele. Hhayi umlandeli kaPeyton Manning (ovela eNew England) kepha ngiyakwazi! Ngilithanda kakhulu iphuzu mayelana "nokusabalalisa ibhola nxazonke". Ukuze uthuthukise ukubonakala kwakho futhi uthole izixhumanisi ngokwemvelo, udinga okuqukethwe komkhiqizo kuzakhiwo zewebhu okungezona ezakho.
Mar 2, 2016 ku-6: 45 PM
Isihloko esihle ekwakhiweni kwesixhumanisi. Ngokuqinisekile ngizosebenzisa le ndlela.